ကလေးရှိသော မိခင် နှင့် ၀န်းကျင် အတွက်ရေးဖြစ်တာပါ။ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Health & Fitness » ကလေးရှိသော မိခင် နှင့် ၀န်းကျင် အတွက်ရေးဖြစ်တာပါ။
ကလေးရှိသော မိခင် နှင့် ၀န်းကျင် အတွက်ရေးဖြစ်တာပါ။
Posted by ခင်ခ on Sep 24, 2012 in Health & Fitness | 48 comments
တစ်ခါတလေ ကလေးတွေ နေမကောင်းဖြစ်တတ်တယ် ဒါမှမဟုတ် ကျန်းမာရေးခေတ္တချို့တဲ့တာတွေဖြစ် တတ်တယ်လေ၊ အဲဒီအခါမှာ ဆေးခန်းဆရာဝန်ဆီ အကယ်လို့ချက်ချင်းမသွားနိုင်သေးခင် မိမိအိမ်မှာ လောလောဆယ် ကုသဖို့ လိုတာတွေရှိတတ်သလို သတိပြုပြီး ဆေးရုံ၊ဆေးခန်းသွားရတာတွေရှိတာမို့ အဲဒီ ကျဘာ လုပ်လို့လုပ် ရမှန်းမသိဖြစ်နေတတ်တဲ့သူတွေအတွက် ကျွန်တော်ဖတ်ဖူးတဲ့ စာပေတွေထဲကမျှဝေပါရ စေနော်။
တစ်နှစ်အောက်ကလေးများလေထိုးလျှင် – တစ်နှစ်အောက်ကလေးများလေထိုးတာ ရောဂါမဟုတ်ပါ၊ ကလေး တိုင်းဖြစ်တတ်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် ဂရိုင်းမက်ချာ၊ ဆီမက်သာကုန်း အစရှိတဲ့လေဆေးတွေဟာ ကလေးအတွက် အခန့်မသင့်ရင် ကောင်းကျိုးထက် ဆိုးကျိုးပိုပြီးဖြစ်နိုင်သလို တစ်ချို့ရင်လူးဆေး လူးပေးကြပါတယ် တစ်နှစ် အောက်အရွယ်မို့ ကလေးရဲ့ အသားအရေဟာနူးညံနေတတ်တာမို့ ရင်လူးဆေးအတိုင်းအဆကြောင့် ဓာတ်မ တဲ့ဘဲ အပူလောင်တတ်တာကိုလည်း သတိပြုပေးပါ၊ နေကောင်းနေတယ် ကိုယ်ပူမရှိဘူးဆိုရင် ရေနွေးနွေးလေး ပြုလုပ်ပြီး ကလေးကိုထိုင်လျက်စိမ်ချိုးပေးလျှင်တော့ အကျိုးရှိပါလိမ့်မယ်၊ တချို့ကလေးတွေဟာ ရေဆော့ရင်း ဗိုက်နာတာတောင် မေ့သွားနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
ခိုက်မိလျှင် – အရေပြား စုတ်ပြဲ သွေးထွက်လျှင်တော့ ဘီတာဒိုင်း အစရှိသည့်အနာလိမ်းဆေးတွေထဲ့ကြပါတယ်၊ ဒါပေမယ် တစ်ခါတစ်ရံမှာတော့ အရေပြားမစုတ်ပြဲ၊ သွေးမထွက်ဘဲ အရေပြားအောက်မှာ သွေးခြည်ဥသွားတာ မျိုးကြုံရပါလိမ့်မယ်၊ ထိုအခါ အိမ်မှာရေခဲသေတ္တာအအေးခံထဲမှာ အေးနေသော အသီးအရွက်ထုပ်ရှိရင် အဲဒီ အသီးရွက်ထုပ်တစ်ထုပ်ယူပြီး ကပ်ပေးလျှင် သက်သာပါလိမ့်မယ်၊ အသီးအရွက်ထုပ်မရှိရင် ရေခဲကိုအ၀တ်ပါး လေးနဲ့ထုပ်ပြီး ကပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
နှာစေး ချောင်းဆိုး – နှားခေါင်းပိတ်တာကို သက်သာအောင် ဘေးအကင်းဆုံးနဲ့ အထိရောက်ဆုံးက နှာခေါင်းထဲ ကိုဆားအရည်ကြည် ခတ်တာပါ၊ ဆားရည်ကြည်က အိမ်မှာကိုယ်ဖာသာလုပ်လို့ရပါတယ်၊ ရေတဖန်ခွက် ( ရှစ် အောင်စ/ ၂၄၀ စီစီ ) ထဲကို လက်ဘက်ရည်ဇွန်းသေး တ၀က်စာ အိမ်သုံးဆားပြီးမွှေပါ၊ ခဏနေရင် မျက်စဉ်း ပုလင်း၊ အားဆေးပုလင်းမှာပါတတ်တဲ့ ဆေးစုတ်တံလေးကိုသေချာဆေးပြီး အဲဒီစုတ်တံလေးနဲ့ စုတ်လို့ ဆား အရည်ကြည်ကို နှာဝတစ်ဖက် တစ်စက်ချ ကလေးကိုရှုသွင်းစေပြီး ခဏစောင့်၊ ပြီးမှ နောက်တဖက်သို့ တစ် စက်ချ ခုနတိုင်းကလေးကို ရှုသွင်းစေလို့ တစ်နေ့လေးချိန်လောက်ခွဲလုပ်ပေးလိုက်ပါ သက်သာပျောက်ပါ လိမ့်မယ်၊ စားစရာအနေနဲ့ အဲဒီအချိန်မှာ စွတ်ပြုပ်ပူပူလေး တိုက်ပါ၊ ကလေးရှုသွင်းတဲ့အခါရေဓာတ်ပါဖို့လိုပါ တယ်၊ အဲကွန်းခန်းမှာကလေးကို ထားတယ်ဆိုရင် ရေနွေးငွေ့လွှတ်စက်လေးရှိရင်ကောင်းပါတယ်၊ ကိုရီးယား ကားတွေမှာ လူနာခန်းတွေမှာ ရေနွေးငွေလွှတ်နေတဲ့ စက်လေးတွေရှိနေတာ တွေ့မိကြပါလိမ့်မယ်။ အကယ်၍ ရေနွေးငွေ့လွှတ်စက်အဆင်သင့်မရှိရင် အဲဒီအချိန်မှာ ရေခွက်ကလေးတစ်ခွက်ရေထဲ့ပြီး အခန်းထောင့်နားထား ပေးပါ၊ သဘာဝလေပြူတင်းဖွင့်ထားရင်တော့မလိုပါ၊ ဆားဆိုတဲ့နေရာမှာ တစ်ချို့အိမ်တွေမှာ အိုင်အိုဒင်းဆား သုံးကြတာရှိပါလိမ့်မယ် ကျွန်တော်အသိဆရာဝန်တစ်ဦးပြောဖူးတာကာ အိုင်အိုဒင်းဆားသည် မျက်စိထဲဝင်ရင် အခက်မသင့်ပါက အနာဖြစ်တတ်တယ်လို့ဆိုပါတယ် တစ်ချို့သူတွေရဲ့ မျက်သားက အိုင်အိုဒင်းဓာတ်မတဲ့လို့ ဆိုပါတယ်၊ ဒါကြောင့်ရိုးရိုးအိမ်သုံးဆာဘဲသုံးပေးပါ နှာခေါင်းထဲထဲ့တယ်ဆိုပေမယ် ကလေးကလှုပ်လို့မျက်စိထဲ အခန့်မသင့်ဝင်တတ်နိုင်လို့ပါ။
လသားကလေးရဲ့ ခေါင်းကကျပ်ခဲကလေးတွေ – သံလွင်ဆီ သို့မဟုတ် မာဂျရင်း လိမ်းပေးပြီး နူးလျှင်ခွာလိုက်၍ ရပါသည်။ တစ်နေ့နှစ်ခါ တစ်ပတ် ၁၀ ရက်လောက်ဆိုပျောက်သွားနိုင်ပါတယ်၊
ချောင်းဆိုးသံကြီးနှင့် ကလေး – တစ်ခါတလေ ကလေးချောင်းဆိုးသံဟာ အသံနက်ကြီးနဲ့ဆိုးတတ်တာကို ကြုံ ကြသူများရှိပါလိမ့်မယ်၊ ကလေးတိုင်းမဟုတ်ပါဘူး တစ်ချို့ကလေးတွေမှာပါ၊ ဇလုတ်ရောင်လို့ဖြစ်တာပါ၊ ဗိုင်းရပ်စ်ပါဘဲ၊ ရောဂါသဘာဝက မပြင်းထန်ပါ၊ ဒါပေမယ့် ကလေးက ဇလုပ်သံကြီးနဲ့ အဆက်မပြတ် ချောင်းဆိုး တတ်ပါတယ်၊ အသက်ရှုသွင်းတိုင်းလည်းရှိုက်သံကြီးမြည်နေပြီး ရင်ဘတ်အောက်လည်း ချိုင့်ဝင်နေတတ်တယ်၊ တစ်ပတ်လောက်ဆိုရင် သူ့အလိုလိုပျောက်တတ်ပေမယ့် ဖြစ်နေတုန်းကလေးက သနားစရာတယ်ဆိုရင်တော့ ရေနွေးငွေ့လေး ရှုပေးခိုင်းလိုက်ရင် သက်သာပါလိမ့်မယ်၊ ဒါပေမယ့် တစ်ချို့ကလေးတွေက ရေနွေးငွေ့ပူကို မခံချင်လို့ရုန်းရင် ဆက်မလုပ်စေပါနဲ့ အကြောင်းက ငိုလျှင်ချောင်းပိုဆိုးစေတတ်လို့ပါ။ ရေနွေးငွေ့မရှုစေချင် ရင်တော့ ကလေးကို ပြင်ပမှာ ခဏလမ်းလျောက်စေပါ၊ လမ်းမသွားတတ်သေးလျှင် ချီ၍တစ်ပတ်ခဏလောက် နေပေးလိုက်ပါ။ တစ်ခါတလေ ပတ်ဝန်းကျင်အပြောင်းအလဲကလည်း သက်သာစေပါတယ်။
၀မ်းလျှော ၀မ်းပျက်လျှင် – ဆရာဝန်ထံပြသင့်ပါတယ်၊ မပြမှီဓာတ်ဆားရေတိုက်သင့်တာပါ၊ တစ်ခါတလေ ညအချိန်ကြီးဖြစ်နေလို့ ဒါမှမဟုတ် သွားဝယ်မရလောက်အောင် အခြေအနေက ဖြစ်နေတာမျိုးကြုံရတတ်ပါ တယ် အဲဒီအခါ ဓာတ်ဆားရေ အဆင်သင့်မရှိရင် ကိုယ်ဖာသာဖျော်တဲ့နည်းလေးပါ၊ ရေက လက်ဖက်ရည် ခွက် နှင့် လေးခွက်၊ ဆားက လက်ဖက်ရည်ဇွန်းသေးနှင့် တစ်ဝက်၊ သကြားက ထမင်းစားဇွန်းနှင့် နှစ်ဇွန်း အချိုး အတိုင်း ထဲ့ပြီးမွှေပေးလိုက်ရင် အရေးပေါ်အတွက် အဆင်ပြေပါလိမ့်မည်ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီမှာဓာတ်ဆားရေနဲ့ ပက်သက်ပြီးဗဟုသုတလေးထပ်ဆွေးနွေးပါရစေ၊ ၀မ်းလျောနေတဲ့ကလေးကို ဓာတ်ဆားရေတိုက်တယ် ကလေးကမသောက်ဖို့ငြင်းရင် သူအနေနဲ့ ရေဓာတ်ခန်းခြောက်မှုမဖြစ်သေးလို့ပါ၊ တကယ်ရေဓာတ်ခန်းခြောက်လာပြီဆို ဘာအရသာမှမရှိတဲ့ ငန်ကျိကျိဓာတ်ဆားရေကို အငမ်းမရသောက်ပါ လိမ့်မယ်၊ ဒါပေမယ့် ခဏတမ်းကလေးက ဓာတ်ဆားရေသောက်နေပြီဆို တဖက်ကဓာတ်ဆားရေ၀င်လို့ ၀မ်းသာစရာဖြစ်ပေမယ့် တဖက်က ကလေးမှာရေဓာတ်အတော်နည်းနေတဲ့ ဝေဒနာခံစားနေရပြီဆိုတာသတိပြု ပေးရပါလိမ့်မယ်၊ ၀မ်းသွားများလို့ရေဓာတ်ခန်းခြောက်မှု့မြန်လျှင် ကလေးအတွက်ဓာတ်ဆားတိုက်ပေမယ့် အန္တရာယ်ရှိနိုင်ပါတယ်ဆိုတာ အထူးသတိပြုစေချင်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ၀မ်းသွားတဲ့ကလေး သီးစုံဓာတ်ဆား မတိုက်သင့်ပါ သကြားဓာတ်ကဲထားလို့ ၀မ်းပိုသွားတတ်ပါတယ်။ ၀မ်းသွားတဲ့အပြင် အန်တတ်ရင် ကိုလာကို မတိုက်သင့်ပါ၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ပြန်အန်တဲ့အခါ အစာအိမ်သွေးယိုမှုရှိနေပေမယ့် သောက်ထား တဲ့အချို ရည်တွေပြန်အန်တယ်ထင်ပြီး အယူအဆမှားတတ်ပါတယ်။
နှာခေါင်းသွေးယိုလျှင် – ကလေးကို ရှေ့သို့ကိုင်းထားပါ၊( နောက်လှန်မထားပါနှင့် )၊ နှာခေါင်းကိုလူကြီးလက်ဖြင့် ၁၀မိနစ်ခန့်ညှစ်ထားပေးပါ၊( ကလေးကို ပါးစပ်ဟ၍ အသက်ရှုပါစေ) ရေခဲကပ်တာတွေ၊ ဂွမ်းရေစွတ်တာတွေ ကတော့ ကလေးကိုအကျိုးမဖြစ်စေပါဘူးလို့ ယူဆပါတယ်၊ ရာသီဥတု ပူပြင်းခြင်း၊ နှာအလွန် စေးခြင်း၊ အဖျား တက်ခြင်းနှင့် နှာခေါင်းထဲ လက်နှိုက်ခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
ချက်ချင်း ဆေးရုံသွားသင့်ခြင်း – ကလေးဖျား၍ သွေးထွက်ထားသောအနီ စက်ကလေးများတွေ့ရရင် သေချာ စမ်းစစ်ပေးပါ၊ အနီစက်တိုင်းသွေးထွက်ထားတာ မဟုတ်ပါ၊ လက်နှင့်နှိပ်ကြည့်လို့ ဖြူသွားလျှင် သိပ်ကိစ္စမရှိပါ၊ မဖြူဘဲ ဆက်ရှိနေလျှင်တော့ သွေးထွက်ထားတာပါ၊ မသေချာလျှင် ရေသန့်ဗူးအဖုံး၊ ဖန်ခွက်အသေးနဲ့ ဖိကြည့် ပြီး ရေသန့်ဗူးအဖုံကို ဖယ်ကြည့်လိုက်လို့ စမ်းသပ်ပါ။ သွေးစက်ကလေးများရော သွေးခြည် ဥတာရော တွေ့လျှင်(အဖျားရှိသည်ဖြစ်စေ၊ မရှိသည်ဖြစ်စေ အရေးကြီးပါတယ်)၊ ပြီးတော့ ကလေးက နှုန်းခွေနေမယ်၊ အဖျားမရှိဘဲ နှုန်းခွေရင်ပိုသတိပြုပါ၊ ကလေးသဘာဝ အဖျားသက်သာတာနဲ့ ဆော့တတ်တဲ့သဘောရှိပါတယ်၊ သွေးခြည်ဥများပြီး ဒူးနှင့် တထောင့် ဆစ်ပါနေမယ် ဒီလိုအချက်တွေတွေ့လာပြီဆို အချိန်မဆိုင်းဘဲ နီးရာဆေးရုံ ကိုသွား၍ လည်းကောင်း၊ ကျွမ်းကျင်သော ဆရာဝန်ကို လည်ကောင်း ပြသပြီး ဆေးကုသခြင်း ပြုသင့် ပါတယ်၊ ထိုလက္ခဏာများသည် အခန့်မသင့်ရင် ကလေးအသက် ကိုထိခိုက်နိုင်သော သွေးလွန်တုတ်ကွေး ဖြစ်ပါလိမ့် မယ်။ ရောထွေးနိုင်စရာ တစ်ခုတော့ရှိပါတယ် ရေကျောက်ပေါက်လျှင်လည်း ဖျားမည်၊ အနီစက်လေး များထွက် မည် ဖြစ်ပါသည်၊ ဒါပေမယ့် ရေကျောက်အနီစက်လေးများက အရည်ကြည်ဖုအဖြစ် နောက်ပိုင်းပြောင်း သွားပါ တယ်၊ ဒါကြောင့် ကျွမ်းကျင်သော ဆရာဝန်ကို ပြသပြီး ဆေးကုသခြင်း ပြုသင့် ကြောင်းပါ။
အန်သည့်အခါသွေးပါလျှင် – တစ်ခါတလေ ကလေးတွေအကြောင်းတစ်ခုခုအရ အန်တတ်ပါတယ်၊ အားနဲ့ အင်နဲ့ အန်တဲ့အခါမှာ သွေးစလေးတွေပါတတ်ပါတယ်၊ အဲဒီမှာ အာခေါင်နံရံကွဲပြီး သွေးစလေးပါတတ်သလို မိခင်နို့သီးခေါင်းကွဲမှု့အရ သွေးစကို မျိုမိပြီးအန်တာမျိုးလည်း သွေးစပါတတ်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် အန်သည့်အခါ သွေးစသည် အနီရောင် ရဲရဲမဟုတ်ဘဲ ဘလက်ကော်ဖီရောင် အနှစ်မျိုးဆိုလျှင် အရေးကြီးပါပြီ၊ ဒါဟာ အစာအိမ် ကထွက်လာတာပါ၊ ဆေးရုံဆေးခန်း ချက်ချင်းသွားပြသင့်ပါတယ်။ ။
ပြီးခဲတဲ့ရက်ပိုင်းကာလက မန်းရောက်နေတဲ့ ကလေးအထူးကုဆရာဝန်ကြီးတစ်ဦးနဲ့တွေ့ခဲ့ရာ ကလေးကျန်းမာ ရေးစာအုပ်လေးတွေ လက်ဆောင်ရခဲ့လို့ အခုတလောအဲဒီစာအုပ်တွေဖတ်ဖြစ်နေတာနဲ့ ကျွန်တော်ဖတ်မိတဲ့ ထဲက ပြန်လည်ဝေမျှရေးပေးမိတာပါ၊ ခင်ခက အိမ်ထောင်ရှိပေမယ့် ကလေးမရှိတဲ့အတွက် လက်တွေ့မှာ ကွာခြားမှုတွေရှိလို့ အငြင်းပွားစရာဖြစ်ရမယ်ဆိုရင်တော့ ဗဟုသုတရစရာအဖြစ်သာမှတ်ပါလို့——-။
ကိုခင်ခရဲ့အကောင်းဆုံး သတိပေးတွေကြောင့်မို့ ရွာထဲက ကလေးအမေတွေ အားလုံး စိတ်အေးလက်အေးနေလို့ရပြီဗျို့
ကလေးအမေမဟုတ်ပေမယ့် …. အိမ်ကတူလေး တူမလေးတွေအတွက် ဗဟုသုတရအောင်မှတ်သားထား ပါမယ် …. (ကိုပေအထင်မှားမည်စိုးသောကြောင့် ထိုသို့ရေးခြင်းဖြစ်သည်)…
နှာခေါင်းပိတ်တာက မွေးကင်းစကလေးတွေနဲ့ လသားကလေးလေးတွေအတွက် ထိုနည်းကိုလုပ်ရန် မိခင်အနေနှင့် အလွန်လက်တွန်းမိမှာအမှန်ပဲ … တခြားနှာခေါင်းပြင်ပမှာ လုပ်လို့ရတဲ့နည်းလေးရှိရင်လည်း မစပါဦးနော် … ဦးဦးခင်ခ …..
သြော် .. ယောက္ခမနဲ့ ချွေးမ .. တပြိုင်တည်း ပို့စ်ဖတ်နေတာပါလား .. အဟိ …
ခုနက .. သူ့ကော့မန့်မတွေ့သေးပါဘူး …. ။ အာပွား ….. ခွိခွိ :chit:
အလွန်လက်တွန့်မိမှာအမှန်ဆိုရင်တော အခြားနည်းတော့ မဖတ်မိဘူးဗျ၊ ငယ်ငယ်က အဖွားတို့လုပ်ပေးတဲ့ နည်းတော့ မှတ်မိတာရှိတယ် ကလေးနှာပိတ်ရင် ငယ်ထိပ်ကို ပရုပ်ဆီနဲ့အုန်းဆီလေး မျှတအောင်လုပ်ပြီး လူးပေးတာဘဲ ပျောက်မပျောက်တော့မမှတ်မိဘူး အဲလိုတော့ အလူးခံရဘူးပါဗျာ။
အမ ခိုင်ခိုင်ရေ …
နှာခေါင်းပြင်ပမှာ လုပ်လို့ရတဲ့နည်းတစ်မျိုးတော့ရှိတယ် ……
အိမ်က တူလေး နှာခေါင်းပိတ်ရင်တော့ လုပ်ပေးနေကျ နည်းလေးပါ …
စမုံနက် အစေ့လေးတွေကို လှော်ပြီး အ၀တ်နဲ့ထုတ်ပါ ..
ပြီးရင် ကလေးကို မကြာခဏရှူခိုင်းရင်လဲ သက်သာပါတယ် ……..
မစနေရေ နည်းလမ်းလေးဝင်ရေပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ၊
အဲဒီနည်းလမ်းကို ဖတ်ပြီးတွေးမိတာ ကလေးကိုရှုခိုင်းတဲ့အခါ ပက်လက်အနေအထားထက် အနည်းငယ် ခေါင်းကိုထောင်စေပြီး ရှုခိုင်းတာပို သင့်တော်မယ်ထင်တယ်နော်၊ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ အ၀တ်နဲ့ထုပ်တာ မလုံခဲ့လို့ရှိခဲ့ရင် စမုံနက်အစေ့လေး ကလေးနှာခေါင်းထဲ မတော်တဆ ၀င်သွားမှာ တွေးပူလို့ပါ။
အောက်မှာ မစနေမေးထားတာကို ဖတ်မိတာထဲကပြောရရင် ကလေးကို အိပ်စေချင်တဲ့ အချိန်ထက် နာရီဝက်လောက်စောပြီး နွားနို့ပူနွေးလေးတိုက်ပေးရင် နှစ်ချိုက်စွာအိပ်စေတယ်တဲ့။ အဆီထုတ်ထား တဲ့နွားနို့က ကလေးအတွက် အကျိုးမဖြစ်စေတာလည်း သတိပြုပါ၊ ပြောင်းလဲ မထားတဲ့ သဘာဝနွားနို့က ကလေးအတွက် သင့်လျှော်ပါတယ်။
ကျေးကျေးပါ … လေးခင်ခ …
ယောက္ခမကြီး .. ဒေါ်ဗိုက်ဖူးခိုင် … လာဖတ် … ဒီမှာ ..မြန်မြန်လာဖတ် …. ။ ပြီးရင် .. အလွတ်ကျက် …
ရှင် အပြုစုကောင်းမှ … ကျုပ်ချစ်ချစ်လေး ကျန်းကျန်းမာမာနဲ့ …. ကြီးပြင်းလာမှာ …. ခွိခွိ :harr:
ဒီမယ် ဒေါ်etone ရှင်တယောက်ထဲအပိုင်မစီးပါနဲ့ ကျုပ်လဲတ၀က်ပါဒလယ်
အွန် … မရပါဘူးအေ ….
အချစ်နဲ့ ..စစ်မှာ မတရားတာမရှိဘူး …….. ဖူးစာ ဆိုတာ မရှိဘူး ….. ဦးရာပဲ ရှိတယ် …
နာက .. သူ့ကိုဝင်းကြည် တလလောက်ကတည်းက ဘွတ်ကင် လုပ်ထားတာ … ညည်းလိုချင်ရင် နောက်တယောက် ထပ်မွေးခိုင်အေ ……… သူငယ်ချင်း အရင်းကြီးပေမယ့်.. ရဘူးနော် .. ဒါနာ့ဟာပဲ …..
အမလေး … လုနေကြတာ လုနေကြတာ … ဘယ်သူကသားမွေးမယ်ပြောလို့လုနေတာလဲ … သူတို့လုပ်တာနဲ့ နာ့သားလေးတောင် သူတို့လို အမယ်အိုတွေကို ယူရမှာစိုးလို့ အခြောက် ကလေးမွေးလာရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ …. သိပ်လုမနေနဲ့ အမွှာပူးလည်းမမွေးနိုင် ဘူးနော် …. တကယ်လို့အမွှားပူးမွေးလို့ကတော့ နှစ်ယောက်လုံးကို တစ်ခါတည်း အိမ်မှာ ခေါ်ထားလိုက်မှာ …..
မသိလို့မေးရဦးမယ် … ဘာစိတ်ကူးနဲ့များ ယောက္ခမတော်ချင်တာနေတာလဲ … ဒီက ဒီလောက်စွာပြီး ဂွကျတဲ့လူကိုများ ယောက္ခမတော်ချင်နေကြသေးတယ် … အံ့ရော .. အံ့ရော ……
အိုး…….. ယောက္ခမကလည်း .. ဒီအဆင်နဲ့ ဒီအဆင်ကို … ဟီးဟီး …
ယောက္ခမ စွာတာလောက်ကတော့ .. ဒီချွေးမက အိပ်နေသလောက်ပဲရှိတယ်နော် … အဟေးဟေး ….. :hee: ယောက္ခမတော်ချင်တာကလေ … ဗလအားကိုးနဲ့ အနိုင်ကျင့်လို့ မရတဲ့ ယောက္ခမျိုးမို့လို့ပါ … အဟီး …. :harr:
ကိုခင်ခရေ … လွယ်ကူအသုံးဝင်ပြီး ဗဟုသုတအများကြီးရတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်…
မှတ်သားပြီး ကူးယူထားပါတယ်.. ကျွန်ကတို့လိုကလေးအမေတွေအတွက်တော့ အရမ်းကောင်းတဲ့ post တစ်ခုပါဘဲရှင်…
candle တို့ လိုကလေးအမေတွေအတွက် လက်တွေ့ 
အသုံးဝင်လို့ကိုခင်ခ ကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်..
ဦးစာမိ ဦးစာမိ … ပေါ်က ဒေါ်အိတုံနဲ့ ဒေါ်ရွှေကြည်က ကလေးအမေတွေမဟုတ်ဘူး …. သူတို့က ကလေးလုမယ့်သူတွေ …….. ခစ်ခစ်ခစ်
အွန် .. ယောက္ခမ … ကလေး အမေ ထင်စရာလားအေ … ။
ကျွန်မနဲ့ မကြည်ပြာ နှစ်ယောက်စလုံးက .. အပျိုဂျီးတွေဆိုတာ .. ဦးဦးဆာမိသိတယ် … မယုံရင်မေးကြည့် … အဟီး
ဒါနဲ့ အူးလေး …သားလေးက ဘယ်အရွယ်လဲ ဟင်င်င် …
ခုမှ ၇ နှစ်နှစ်သားပဲရှိပါသေးတယ်ခင်ဗျ
နဲနဲတော့ စိတ်ရှည်ရှည်ထားပြီး စောင့် ပါခင်ဗျ။
အဲ ၇နှစ်ဆိုသိပ်မကွာပါဘူး ကျွန်မအသက်ရှေ့ဂဏန်းဖြုတ် လိုက်လျှင်ရွယ်တူပါပဲ အဟဲ
အဲ အဲ မိရွှေကြည်ပါဘူးလေ မခိုင်ခိုင် ယောက်ခကြီးရဲ့ အဟီးးးးး
မခိုင်ရေ လောလောဆယ်နှစ်ယောက်ဘဲ လုမယ့်သူရှိသေးတာပေါ့၊ နောက်တိုးစာရင်းထပ်တက်လာရင်ကော ဘယ်လိုလုပ်မလဲဟင်။
ကျွန်တော်ဆရာဝန်တယောက်တော့ မဟုတ်ပါဘူး ကိုကြီးမိုက်ရေ။
ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ စာအုပ်တွေကိုစိတ်ဝင်စားလို့ ဖတ်တာများတယ်၊ အဲဒီထဲကဖတ်ဖူးတာတွေကို ကိုယ်နဲ့သိသူတွေမှာ ရောဂါတစ်ခုခုဖြစ်ရင် ကိုယ်သိသလောက်ပြောပြပြီး အားပေးတယ်၊ အသိမိတ်ဆွေ တစ်ယောက် ဘာရောဂါတော့ရှိနေပြီဆို အဲဒီရောဂါအကြောင်းဆိုင်တဲ့ စာအုပ်တွေလိုက်ရှာဝယ်တယ် ကိုယ်တိုင်ဖတ်ပြီး ဘယ်လိုကုရင်တော့ ဘာဖြစ်နိုင်တယ် အဲလိုအားပေးတယ်၊ ဒါနဲ့ဘဲ သိတာလေးတွေကို ရွာထဲမှာပြန်ရေးပေးမိနေတာပါဗျာ။ စာကယ်ရီယာပေါ့လေ။
ရွှေယောက်မအတွက် ကူးသွားပါတယ်…..ကိုခင်ခက ဆရာဝန်မဟုတ်ပေမယ့် ဂဇက်မှာတော့
အားကိုးရတဲ့ ဆရာဝန်ပဲလေ…စာအုပ်ဖိုးတွေလည်း ကုန်မယ်နော်…
ဖတ်ပြီး မှတ်သွားပါတယ်ကိုခင်ခရေ ကျေးဇူးပါ။
ကလေးရှိတဲ့မိခင်တွေကိုတော့ အများအားဖြင့် ကလေးအမေလို့ခေါ်တာပေါ့ဗျာ
တစ်ခုခုထိခိုက်ဒဏ်ရာရသွားရင်တော့ ပနက်စလင်ငါးသိန်းအားကိုကြိတ်ပြီး အုန်းဆီနဲ့ဖျော် လိမ်းလိုက်တာဘဲ
နှာစေးရင်တော့ မျက်လှည့်ဝိုင်းမှာရောင်းတဲ့ ဂမုန်းအခြောက်တစ်မျိုးကို အမှုန့်လေးချစ်ပြီး
နှာခေါင်းမှာတေ့ပေးလိုက် ဟတ်ချိုဟတ်ချိုဆိုပြီး တော်နေကြာ ပျောက်သွားတာဘဲ
တစ်ခါတစ်လေကြတော့လည်း ရေနံဆီကို နှာခေါင်းအောက်မှာသုတ်ထားပေးလိုက်တာဘဲ
ချောင်းဆိုးရင်တော့ ခွေးသေးပန်းအရွက်ကို အရည်ညှစ်ပြီး ဆားနည်းနည်းထည့်သောက်
ဒါကတော့ အော်ဂဲနစ်လားဘာလား အဟာရမရှိတဲ့တောစာတောင်စာတွေစားတဲ့
ကလေးတွေမှာဖြစ်ရင် ဒီလိုဘဲ လုပ်နေကြတာဘဲ
ကိုအောင်ပုရေ ဆေးနည်းလေးတွေ ၀င်ပွားပေးလို့ ဗဟုသုတရပါ၏
ကလေးလုမယ့်လူတွေ များလှပါကလား။ အဝေမတဲ့လို့ စိတ်တွေ မညစ်ကြပါနဲ့။
ဒီမှာ တစ်ယောက်လာပြီ။ ခုနစ်လ ရှိပြီလေ။ သားလေးတဲ့။ အမေနဲ့တူလို့ကတော့ အပျံစား အချောစားလေး ဖြစ်လာမှာ သေချာကြောင်း ကြေငြာမောင်းခတ်လိုက်ပါတယ်နော်။
ကိုခင်ခရေ ဒီပို့စ်လေးအတွက် ကျေးဇူးအထူးပါ။ ရေငတ်တုန်း ရေတွင်းတုန်းကျသလိုပါပဲ။
အစ်မရေ ..၀မ်းသာစရာ သတင်းပါပဲ … အဟီး …. ခုနှစ်လတောင်ရှိပြီဆိုတော့ သိပ်မစောင့်ရတော့ဘူးပဲ …. ။ အမေနဲ့ တူလို့ … အပျံစားလေးဖြစ်မှာ ဆိုပဲ .. အဟီးးးးးး …. ဒါဆိုလည်း ယောက္ခမတော်ပါရစေလားနော် …. ။ လင်ကိုဘုရား သား ကိုသခင်ဆိုတဲ့ စကားလိုပဲ … ချွေးမ၀တ္တယားကျေပါရစေလားနော် …. နော် … နော် လို့ ….. ခွိခွိ :harr: :hee:
ကယ်တင်ရှင် ဆရာမ၀င့်ရေ ….. အဲဒီချွေးမကြီး … အဲဟုတ်ဝူး …… မမပဲတာဝန်ယူလိုက်ပါနော် …… ၀ူးးးးးးးးးးးး …. အခုမှပဲ ၀ဋ်ကျွတ်တော့တယ် …..
အမကသက်ဦးလေးလား ဂုဏ်ယူပါတယ် ….. သားဦးလေးရမှာဆိုတော့ … တန်ဖိုးရှိပါတယ် … အရင်ခေတ်ကဆိုရင် မိန်းမတစ်ယောက်က ခိုးရာလိုက်မပြေးဘဲ တင့်တင့်တယ်တယ်နဲ့ မင်္ဂလာဆောင်ထားပြီး သားဦးမွေးရင် အရမ်းဂုဏ်ရှိတယ်တဲ့ ….မမကသားလေးလိုချင်ပုံရတယ် … မိဘဆိုတာတော့ ဘာလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ချစ်မှာမှန်ပါတယ် … ကိုယ်လိုချင်တာရတော့ ပိုလို့တောင်ဝမ်းသာရတာပေ့ါလေ ……..
ငါ့ယောက္ခမကလည်းရှေးရိုးဆွဲ ကြီးပါလားဟ :hee:
ဂုဏ်ရှိတာ ခိုးယာလိုက်တာ သားမွေးတာ ဘာမှမဆိုင်ပါ
ကိုယ့်ကလေးက ဘာသာတရားကိုင်းရှိုင်းပြီး မိဘစကားနားထောင်တာနဲ့တင် ဂုဏ်ရှိတယ်လို့ သတ်မှတ်လို့ရတယ်မဟုတ်လား မိဘကိုသိတတ်တယ်ဆိုရင် အတိုင်းထက်အလွန်ပေါ့လေ။ ကြံဖန်ဂုဏ်ယူလိုက်စမ်းပါ ယောက္ခမရယ် ခွိခွိ
ကျမသမီးက ငယ်တုံးက ခဏခဏဖျားတတ်တယ်…
ကလေးအထူးကုဆီ လစဉ်လိုလို သွားခဲ့ရတာ…
မီးပြတ်ချိန် ညဖက်မီးဖွင့်လို့ရအောင် ဘက်ထရီနဲ့ အင်ဗာတာ အိပ်ခန်းထဲမှာထားမိတာ
အသိတစ်ယောက် အလည်လာမှ ဘက်ထရီက အက်ဆစ်နံ့ထွက်တတ်တယ်
ခလေး အတွက် အန္တရာယ်ရှိတယ်၊ထိခိုက်မယ် ပြောလို့ အခန်းပြင်ထုတ်လိုက်မှ
ရွာသူ ဗိုက်ဗိုက် နှစ်ယောက်အတွက်လဲ ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်ကြောင်းပါနော်…
မအိရေ အဲဒါ ၀တ်မှုန် သိုမဟုတ် အနံကြောင့် ဓာတ်မတည့်ခြင်းဖြစ်တာလေ။
ကျွန်တော်ဖတ်ဖူးတယ်၊ အိမ်ကတိုလီမိုလီစာပေစင်မှာ ပြန်ရှာပြီး ဒီညပြန်မန့်ပေးမယ်နော်။
ခုတော့ Please wait ပါ။
ဓာတ်မတည့်ဆိုတဲ့ Hay fever ဒါမှမဟုတ် Allergic ဆိုတာဟာ ညစ်ညမ်းမှုတစ်ခုကနေ လေထုထဲကို ပျံ့လွင့်လာတဲ့ ဓာတုပစ္စည်းတွေက အနံတွေနဲ့ ဓာတ်မတည့်မှုဖြစ်ရတာပါ။ဘက်ထရီအိုးမှာ လုပ်ထားတဲ့ခဲ ပြားတွေဟာ ထဲ့ထားတဲ့အက်ဆစ်ရည်နဲ့ထိတွေ့ပြီး ခဲအငွေ့တွေထွက်တတ်ပါတယ်၊ အဲဒီခဲအငွေ့တွေဟာ အခန်းထဲကလေထုမှာ ပျံနှံနေပြီး ကလေးကရှုမိတဲ့အခါမှာ ဓာတ်မတဲ့မှုကြောင့် နေမကောင်းဖြစ်တာပါ။ အဲဒါရေရှည်မှာ မကောင်းတဲ့လက္ခဏာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်၊ ခဲဆိပ်ကြောင့် မှတ်ဥဏ်ထိုင်းတတ်သလို၊ ဗိုက်ခဏခဏ အောင့်တတ်ပါတယ်၊ ကြာကြာရှုနေမိရင် အရိုးတွေမှာ ခဲအပြင်လိုက်တွေ့တဲ့ထိဖြစ်နိုင်သလို ခလေးမှာ တက်တဲ့ရောဂါရလာနိုင်ပါတယ်၊ ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ ကျောက်ကပ်ထိပြီး သွေးတိုးခြင်းကိုခံစား လာစေမှာဖြစ်ပါတယ်၊ အဲဒီချိန်မှာ ကလေးကို ဗီတာမင်စီနဲ့အေ ပါဝင်တဲ့သီနှံ ဒါမှမဟုတ် သီးနွှဖျော်ရည်တွေ တိုက်ပေးသင့်ပါတယ်။ရှောက်၊ သံပရာ ၊ စတော်ဘယ်ရီ၊ ကီဝီသီး တွေကိုကျွေးပေးပါ။ မဖြစ်မနေအိမ်မှာ ဘက်ထရီသုံးရမယ်ဆိုရင် အခုနောက်ပိုင်း အက်ဆစ်ထပ်ဖြည့်စရာမလိုတဲ့ အိုခြောက်ဘက်ထရီအမျိုးအစား ကိုပိုသုံးသင့်ပြီး ဘက်ထရီနားမှာ ပရုပ်ခွေလေးတွေထားခြင်းဖြင့် ခဲဆိပ်ပြန့်မှုကို သက်သာစေပြီး အချိန်ကြာစွာ အိပ်မယ့် အိပ်ခန်းလိုမျိုးနေရာထက် လေ၀င်ထွက်ဖြစ်စေတဲ့ တံခါးဝင်ပေါက်နားထားခြင်းပြုသင့်ပါကြောင်း မျှဝေရေးပေးပါတယ်နော် မအိရေ။
မျှဝေပေးတဲ့ ပညာတွေအတွက် ကျေးဇူးပါ ကိုခင်ခ ရေ…
ကလေးငယ်တုံးက ညဖက်တွေမှာ အနှီးလဲရ၊နို့ဗူးဖျော်ရ နဲ့ သုံးလေးခါ ထနေရတာမို့…
မီးပြတ်ချိန် ခလုတ်လှမ်းဖွင့်လွယ်အောင် ဘက်ထရီနဲ့ အင်ဗာတာကို အိပ်ခန်းထဲ ထားမိတာ…မှားသွားခဲ့တယ်…
X Ray တောင်ရိုက်ရသေးတာ…ဘာမှမဖြစ်လို့တော်သေးတယ်…
ခုထိလဲ ပူရင် ချွေးထွက်နေလား စမ်းရ သုတ်ပေးရ၊ စောင်ကန်ထုတ်တတ်လို့
အေးရင် ချမ်းနေမလား၊ စောင်ခြုံပေးရ နဲ့ ရေသောက်မယ်၊ရှုးပေါက်မယ်ကပါသေးတော့
ညဖက်ထရပေမဲ့ မီးကလဲမပျက်တော့တာမို့ အဆင်ပြေနေပါတယ်…
ခိုးရာလိုက်ပြေးပီး မွေးထားတဲ့ကလေးက ဘာပုလို့ဂုဏ်မချိတာလဲ မမခိုင်။
အော် ….. ဒွတ်ခပါပဲ …. ဒီချွေးမတွေ တော်တော်တုံးတာပဲ … ဒါကြောင့် ဒီခေတ်မိန်းကလေးတွေကို ချွေးမမတော်ချင်တာ ….. ကဲ …ယောက်ျားမရသေးတဲ့ ချွေးမတွေ သေချာမှတ်ထား …. ဒီကိစ္စတွေကို ဒီဆိုဒ်မှာ သိပ်တော့မပြောချင်ဘူး … ကိုယ်နဲ့အယူအဆမတူတဲ့လူတွေသိရင် ၀ိုင်းအော်ကြမှာလည်းစိုးတယ် ….
ဒါကအမတို့ မွန်ရိုးရာပြောရမလား ဒါမှမဟုတ် အမေပြောထားတဲ့ ကိစ္စတစ်ခုကို ခေါင်းထဲမှာ မှတ်မိနေတာမျိုးလား မသိဘူး …. အပေါ်မှာ အမ၀င့်ပြုံးမြင့်ကို အမပြောခဲ့သလိုအကြောင်းကတော့ … လင်နောက်လိုက်မပြေးပဲ သေချာချာလူကြီးစုံရာနဲ့တောင်းရမ်းလက်ထပ်ယူထားပြီး လင်စုံမယားဖက်လည်းရှိမယ် သားဦးလည်းမွေးထားတယ်ဆို နောက်ထပ်အိမ်ထောင်ပြုမယ့်သူတွေရဲ့ မင်္ဂလာအခန်းအနား ခန်းဝင်ပစ္စည်းတွေကို ပြင်ဆင်ကိုင်တွယ်ခွင့်ရတယ် …. အဲလိုလူမျိုးတွေကိုပဲ ခန်းဝင်ပစ္စည်းတွေပြင်ဆင်ခိုင်းကြတယ် …. သူတို့က ဂုဏ်ကျက်သရေရှိတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်လို့ အမအမေဘက်က မျိုးနွယ်စုတွေက လက်ခံထားကြတဲ့အယူအဆတစ်မျိုးပေ့ါကွယ် ….. ရန်ကုန်မှာတော့ ဒါမျိုးတွေအယူမရှိတော့ပါဘူး ….. အမရဲ့အယူအဆကိုပြောတာပါ ….. ဦးခင်ခရေ စောရီးပါနော် … ချွေးမလေးတွေကြောင့် ဦးဦးပို့စ်မှာ မဆိုင်တာတွေရှုပ်နေတယ် …….
အဘိုးက မွန်စပ်ဆိုတော့ အဲ့အစဉ်အလာကို ကြားဖူးသလိုပဲ…
အင်း … အယူအဆဆိုတာကတော့.. လူတကိုယ် စိတ်တမျိုးပါပဲ မမခိုင်ရေ … ။
ဘ၀နှစ်ခု ပေါင်းစပ်ဖို့ဆိုတာ ၊ ကာယကံရှင်တွေရဲ့ စိတ်ကသာ အဓိက ဆိုပေမယ့် …. ၊ တကောင်ကြွက်မဟုတ်သေးသရွေ့တော့ ၊ အချစ်ကို စံနှုန်း ၊ ပိုက်ဆံ ၊ ဂုဏ်ဒြပ်တွေနဲ့ တိုင်းတာတဲ့ မိဘ၊ဆွေမျိုး ၊ ပတ်ဝန်းကျင်တွေရှိနေနိုင်ပါသေးတယ် ။ တစ်ခါတစ်လေ မိသားစု အသိုင်းဝိုင်းက လက်မခံပေမယ့် ၊ ချစ်တဲ့ လူနှစ်ယောက် ပေါင်းဖက်ဖို့ … ခိုးပြေးတဲ့ အခြေနေမျိုး ဖန်တီးသင့်လျှင်လည်း ဖန်တီးရမှာပါ ။ ဒါကလည်း လစ်ဗင်းတူဂဲသားကို အပြင်းထန် နှိပ်ကွပ်နေတဲ့ နိုင်ငံမို့ပါ ။ ခိုးနိုင်မှ ပေါင်းရမယ့် ဘ၀ဆိုတော့လည်း … နာမည်ပျက်ချင်ပျက်ပါစေ … ခိုးပြေးတယ်ပေါ့နော် … အဟီး :D အပြစ်မပြောလိုပါဘူး … ဒီကိစ္စလက်ခံလို့ရပါတယ် ညှိမရလို့ ခိုးတာ .. ခိုးပေါ့ .. ။
တဖက်က ပြန်စဉ်းစားကြည့်လျှင် …. လူကြီးစုံရာနဲ့ …. တောင်းရမ်းတယ်ဆိုတာကလည်း ရှက်စရာပါပဲ…. ။ လူအများရှေ့မှာ ကျွန်တော် .. ကျွန်မတို့သည် … မကြာခင်၊ အ၀ှာလုပ်တော့မည်လို့ … ကြော်ငြာလိုက်သလိုပါပဲ … ခွိခွိ ။ အဲ့ဒါကျတော့ မရှက်ကြဘူးအေ
မခိုင်ပြောတာကို ကျွန်တော်လည်း ကြားဖူးပါတယ်၊
မင်္ဂလာဆောင် ခန်းဝင်နဲ့ မွေ့ယာအခန်းအနား ကို ပြင်ဆင်ပေး တဲ့နေရာမှာ ပြင်ဆင်ပေးတဲ့ စုံတွဲဇနီးမောင်နှံဟာ ကနဦး( ငယ်လင်ငယ် မယားလို့လည်းဆိုကြတယ်) လက်ထပ်ထိမ်းမြားလို့ သားဦးမွေးထားတဲ့ ဇနီးမောင်နှံက ခင်းကျင်းပြင်ဆင်ပေးရင် အခု လက်ထပ်ထိမ်းမြားကြတဲ့ မင်္ဂလာမောင်နှံဟာ သက်ဆုံးတိုင်မြဲ၊ ကံကောင်းစေတယ်လို့ ယူစကြတာလေ။
အခုတော့ အဲဒီယူဆချက်တွေ ဆက်ပြီးရှိနေလားတော့ မသိဘူးလေ အရင်တုန်း က ရှိခဲ့ကြားခဲ့ပါတယ်။
ကျွန်တော်ယူဆချက်ကြတော့ အဓိက ကတော့ ပေါင်းဖက်ကြမယ့် အမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီး ပေါ်မှာဘဲ မူထည်မယ်ထင်ပါတယ်၊ အိမ်ထောင်သက် သက်ဆုံးတိုင်ပေါင်းကြရတာတွေ၊ မိသားစုဘ၀ စိုပြေပျော်ရွှင်တာတွေ၊ ချစ်ခင်သာယာတာတွေအားလုံးကတော့ ဇနီးမောင်နှံတွေ ကိုယ်တိုင်ရေး ပုံတူပါဘဲလေ။
နောက်တစ်ခုက လူကြီးစုံရာနဲ့ဘဲ တောင်းရမ်းယူသည်ဖြစ်စေ၊ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ခိုးရာလိုက်ပြီး ယူကြသည်ဖြစ်စေ မိမိချစ်တဲ့သူနဲ့ ပေါင်းသင်းနေကြရခြင်းကတော့ မင်္ဂလာပါဘဲဗျာ၊ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ မချစ်မနှစ်သက်တဲ့သူနဲ့ပေါင်းသင်းနေရခြင်းသည်လည်း ဒုက္ခ၊ ချစ်ခင်နှစ်သက်သူနဲ့ ကွေကွင်းရခြင်းသည် လည်း ဒုက္ခ လို့အဆိုရှိတယ်မလား၊ အဲဒီတော့ အမှန်တကယ် ချစ်ကြိုက်ကြတဲ့သူတွေ ဘယ်လိုဘဲဖြစ်ဖြစ် ပေါင်းသင်းနေထိုင်ပြီး ပျော်ရွှင်သောသက်ဆုံးတိုင် ဘ၀တည်ထောင်ကြတာတော့
တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦးလည်း ချစ်ကြတယ်၊ နှစ်ဖက်မိဘကလည်း ကန့်ကွက်စရာမရှိရင်တော့ လူကြီးစုံရာတောင်းရမ်း လက်ထပ်ယူတာက ရှက်စရာမဟုတ်ပါဘူး၊ အဲဒီလိုပြုမူကြတာက ကိုယ့်အတွက်ထက် ကိုယ့်ရဲ့မိဘတွေအတွက် လုပ်ပေးတာဆိုတာပိုပြီးမှန်မယ်လို့ ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ငါ့သားလေး ငါ့သမီးလေး တင့်တယ်စွာလက်ထပ်သွားပြီးဆိုပြီး ကျေနပ်စွာစိတ်ဖြေလျော့နိုင် ကြလို့ပါ။
ကွန်မန့်ကို လွတ်လပ်စွာရေးနိုင်ပါတယ် တောင်းပန်ဖို့မလိုပါဘူး မခိုင်ရေ။ ကျေးဇူးပါ။
ကွန်မန့်ရေးပေးကြသော ရွာသူရွာသားအားလုံးနဲ့ ယောက္ခမ နှင့် ချွေးမ အုပ်စုကို အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်။
ဒေါ်ဗိုက်ဖူးခိုင် ၊ ဆရာမ ၀င်းပြုံးမြင့် ၊ ကိုဆာမိတို့ ရဲ့ … ချွေးမကြီးကလည်း … ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ …. ဟီးဟီး .. ဒါနဲ့ ……. အန်ကယ့်တူလေး .. နေကောင်းလားဟင် .. ဟီး
ကိုခင်ခရေ ဗဟုသုတတွေတိုးရလို့ကျေးဇူးပါနော် … ခုတလော ကျောင်းတုန်းကသူငယ်ချင်းတွေ တစ်ယောက်ပြီးတစ်ယောက် ကလေးမွေးနေကြလို့ facebook မှာ ပြန်လည်ဖော်ပြခွင့်ပြုပါလို့တောင်းဆိုပါရစေ …
aemoshu ရေ ဆောင်ရွက်ပါ ရပါတယ်ဗျာ။
မအိတုံရေ ကျွန်တော်တူတော်မောင်က ကျွန်တော်ထက်ဝပြီး အစားပုပ်တယ်နော်၊ ၀င်ရောက် မန့်ပေး တာ တွေအတွက်လည်း သမီးကိုကျေးဇူးပါ။
လုပ်တဲ့နည်းလေးများရှိရင်လဲ ရေးပေးပါအုံး …….
အိမ်က တူလေးက အခုမှ ၁နှစ်နဲ့ ၄ လပဲရှိသေးတာ …
အရမ်း အဆော့မက်ပြီး အိပ်တာ အရမ်းနောက်ကျလို့
သူ့ဒဏ်ကို မခံနိုင်တော့ဘူး ………. :hee: